ဖခင္ျဖစ္သူကို ပစ္ထားခဲ့တယ္ဆိုၿပီျပင္း ထန္တဲ့ေဝဖန္မႈေတြခံေနရတဲ့ ျမင့္ျမတ္ဘက္ကရပ္တည္ျပီး ျပန္လည္ေျဖရွင္းျပခဲ့တဲ့ ယုန္ေလး – Cele Snap
ယနေ့မှာတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ယုန်လေးက ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ မြင့်မြတ်ဘက်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ယုန်လေးက “အားလုံး ဆန္ဒမစောစေချင်ပါဘူး .
လူတိုင်းကို ကူညီနေတဲ့ မြင့်မြတ်စက်အဖွဲ့ က လူတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်ရင်တောင် ကူညီတဲ့ မြင့်မြတ်
သူ့ အဖေ အမေ အရင်းမောင်နှစ်မ တွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးဖူးဆိုတာဦးနောက် နဲ့ စဉ်းစားပေးကျပါ .
လစဉ် ထောင်ပံ့ကြေးမဆိုလိုဖူး .အဖေ အမေ ကိုကန်တော့တာ ဘယ်လောက်ထင်လဲ .မှန်းကြည့်တာထက် ၃ ဆ လောက်ပိုနေရပါမယ် .Covid ကြောင့် ဘယ်လိုခက်ခဲခဲ နော် .
တာဝန် မပက်ေစေရဘူးကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိတဲ့ လူတွေ အတွက်လည်း ပြောရဖို့ ခက်ခဲပါတယ် .မိသားစု အရေးဆိုတော့ .မြင့်မြတ် ဆိုတာ နာမည်နဲ့ လောက်အောင်မြင့်မြတ်ပါတယ် .ဘာမှ မသိပဲ မဝေဖန်ပါနဲ့ဦး
ဒါပဲ ပြောချင်ပါတယ် . 🙏🙏🙏မနက်ဖြန် ရေးတင်ပါမယ်” လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ယုန်လေးကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ပစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ မြင့်မြတ်ဘက်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောခဲ့ကြပါအုန်းနော်
ယနေ့မှာတော့ မွငျ့မွတျရဲ့ သူငယျခငြျးဖွစျသူ ယုနျလေးက ဝဖေနျခံနရေတဲ့ မွငျ့မွတျဘကျက ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့တာပဲဖွစျပါတယျ ယုနျလေးက “အားလုံး ဆန်ဒမစောစခေငြျပါဘူး .
လူတိုငျးကို ကူညီနတေဲ့ မွငျ့မွတျစကျအဖှဲ့ က လူတစျယောကျ ဒုက်ခရောကျရငျတောငျ ကူညီတဲ့ မွငျ့မွတျ
သူ့ အဖေ အမေ အရငျးမောငျနှစျမ တှကေို ဘာမှမလုပျပေးဖူးဆိုတာဦးနောကျ နဲ့ စဉျးစားပေးကပြါ .
လစဉျ ထောငျပံ့ကွေးမဆိုလိုဖူး .အဖေ အမေ ကိုကနျတော့တာ ဘယျလောကျထငျလဲ .မှနျးကွညျ့တာထကျ ၃ ဆ လောကျပိုနရေပါမယျ .Covid ကွောငျ့ ဘယျလိုခကျခဲခဲ နောျ .
တာဝနျ မပကျစေရေဘူးကြှနျတောျတို့ အားလုံးသိတဲ့ လူတှေ အတှကျလညျး ပွောရဖို့ ခကျခဲပါတယျ .မိသားစု အရေးဆိုတော့ .မွငျ့မွတျ ဆိုတာ နာမညျနဲ့ လောကျအောငျမွငျ့မွတျပါတယျ .ဘာမှ မသိပဲ မဝဖေနျပါနဲ့ဦး
ဒါပဲ ပွောခငြျပါတယျ . 🙏🙏🙏မနကျဖွနျ ရေးတငျပါမယျ” လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖွစျပါတယျ
ယုနျလေးကတော့ ဖခငျဖွစျသူကို ပစျထားခဲ့တယျဆိုပွီး ဝဖေနျခံနရေတဲ့ မွငျ့မွတျဘကျက ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့တာဖွစျပါတယျနောျ ပရိသတျကွီးရဲ့အမွငျကိုလညျးပွောခဲ့ကွပါအုနျးနောျ